July 24, 2019 - Update New
တာဝန်ယူမှု မရှိတဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကြောင့် သိမ်ကြီးဈေး မှာ နှစ်နဲ့ချီအိပ်ခဲ့ရတဲ့ သားအမိ(ရုပ်သံ)
July 24, 2019 Naing 0
တာဝန်ယူမှု မရှိတဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကြောင့် သိမ်ကြီးဈေး မှာ နှစ်နဲ့ချီအိပ်ခဲ့ရတဲ့ သားအမိ(ရုပ်သံ) ယောက်ျားက ဗိုက်တစ်လုံးနှင့် ထားသွားလို့ ရန်ကုန်သိမ်ကြီးဈေး.. နားက ကားတွေကြာွးထဲမှာ နှစ်နဲ့ချီအိပ်ခဲ့ရတဲ့ ချင်းလူမျိုး သားအမိ ချင်းပြည်နယ်ဖလမ်းမြို့ကနေ မိုင်ဆန်သဲ (ခ)မူမူဟာ အသက် (၁၉)နှစ်အရွယ်မှာ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုပြီး တစ်ယောက်ထဲဆင်းလာခဲ့တယ်။ […]
နတ်ကိုင်ကြမ်း ပါတယ်ဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးအောက်ကနတ်ရုပ်ကြီးကို တံတားလုပ်တက်နင်းဖြတ်တဲ့လူရဲ့အဖြစ်
နတ်ကိုင်ကြမ်း ပါတယ်ဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးအောက်ကနတ်ရုပ်ကြီးကို တံတားလုပ်တက်နင်းဖြတ်တဲ့လူရဲ့အဖြစ် လူကောင်းကို အနိုင်ကျင့်ရတာ လွယ်တယ် ပုံပြင်ကလေးက ဒီလိုဗျ။ တခါက ရွာတရွာမှာ ရွာဦးနတ်ကွန်းဘေးမှာ ရေနှုတ်မြောင်း ဖြတ်စီးနေတယ်။ နတ်ကွန်းထဲက နတ်ရုပ်က မတ်တတ်ကိုယ်တော်ကြီး။ တနေ့တော့ လူတယောက်က မြောင်းဘောင်အတိုင်း လျှောက်လာပြီး ဟိုဘက်ကမ်းကို ကူးမယ်လုပ်တယ်။ အဲ့မြောင်းထဲမှာ ရေတော်တော်များနေတယ်။ […]
ကိုကို (၂) ယောက်လုပ်တာလို့ VICTORIA က ပြောကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူ ရုံးတော်တွင်ထွက်ဆို(ရုပ်သံ)
ကိုကို (၂) ယောက်လုပ်တာလို့ VICTORIA က ပြောကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူ ရုံးတော်တွင်ထွက်ဆို(ရုပ်သံ) ကိုကိုနှစ်ယောက် လုပ်သည်ဟု ဗစ်တိုးရီးယားက ပြောခဲ့ကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူ ထွက်ဆို Wednesday, July 24, 2019 ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှ တရားလိုဖြစ်သူ ကလေး၏ မိခင်အား ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးတွင် ယနေ့နံနက် […]
မြန်မာနယ်စပ် မှာ မူးယစ်တရားခံလိုက်ဖမ်းသည့် ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များအား ရွာသား၂၀၀ ခန့် က ပိတ်ဆို့ တိုက်ခိုက်
မြန်မာနယ်စပ် မှာ မူးယစ်တရားခံလိုက်ဖမ်းသည့် ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များအား ရွာသား၂၀၀ ခန့် က ပိတ်ဆို့ တိုက်ခိုက် ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့ညနေ ပိုင်းက ထိုင်းမြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင်ခရိုင် Wiang Haeng ၀င်ဟန်မြို့ နယ်(မြန်မာနယ်စပ်နှင့်ထိစပ်နေသည့် မိုဆယ် တိုင်းရင်းသားများနေထိုင်နေသည့်ကျေးရွာ) […]
ဗစ်တိုးရီးယားအမှု ဒုတိယအကြိမ်စစ်ဆေးအပြီး ဆရာမနှင်းနုကို ဒုတိယတရားခံအဖြစ် ဦးတိုက်လျှောက်
ဗစ်တိုးရီးယားအမှု ဒုတိယအကြိမ်စစ်ဆေးအပြီး ဆရာမနှင်းနုကို ဒုတိယတရားခံအဖြစ် ဦးတိုက်လျှောက် မူကြိုကျောင်းက ဆရာမ နှင်းနုကိုပါ တရားခံ အဖြစ် ဗစ်တိုးရီးယား မိခင်က တရားရုံးမှာ လျှောက်ထားခဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံရတဲ့ အသက် ၃ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ် ဗစ်တိုးရီးယားအမှုရဲ့ ဇူလိုင် ၂၄ ရက်နေ့ […]
တနင်္သာရီမြို့နယ်တွင် ၄ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦး စော်ကားခံရ…
တနင်္သာရီမြို့နယ်တွင် ၄ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦး စော်ကားခံရ… တနင်္သာရီမြို့နယ်တွင် ၄ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်အား အဓ.မ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား 24.7.2019 တနင်္သာရီမြို့နယ် ၊ လယ်သစ်အရှေ့ကမ်းကျေးရွာတွင် ဇူလိုင်လ… ၂၃ ရက်နေ့က ၄ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်အား ၁၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသား မှ […]
လူပြောများနေတဲ့ မိဘမဲ့ကျောင်းတစ်ခု အကြောင်း
မိဘမဲ့ကျောင်းက ကလေးလေးသေဆုံးမှု နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဒီစာကိုတွေ့ရချိန် နောက်ကွယ်မှာ ဆိုးရွားတာတေ လဲ ဒီထက်ပိုနိုင်ပါတယ် တနေ့က မိဘမဲ့ကျောင်းက ကလေးလေးသေဆုံးမှု နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဒီစာကိုတွေ့ရချိန် နောက်ကွယ်မှာ ဆိုးရွားတာတေ လဲ ဒီထက်ပိုနိုင်ပါတယ်အလှူရှင်တေရှေ့တောင်ဒီလိုဆိုတော့လေ မိဘမဲ့ကျောင်းက ကလေးများအသုံးချခံရတဲ့ဘ၀မှ လွတ်မြောက်ကြပါစေ..ကျောင်းအကုန်လုံးကိုမဆိုလိုပါနော်ဒီစာကိုရေးမယ်မရေးဘူးချိန်နေတာ ကြာပါပီ ဒီပို့ စ်မြင်ပီးမနေနိုင်လို့ ပြောပါမယ် […]
ယနေ့ တရားရုံးမှာ victoria လေးရဲ့ ဖြေကြားချက်များ victoria လေးကို တရားရုံးမှာမေးတဲ့ အမေးအဖြေလေးတွေပါဒီပို့ကိုတော့ ထောင်သူရဲဘအုပ်အကောင့်က တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Victoria လေးအမှု့ တရားရုံးမှာ ကလေးကိုမေးတယ် မေး။ ။သမီးကို ဘယ်သူလုပ်တာလဲ? ဖြေ။ ။ ကိုကိုတို့လုပ်တာတဲ့ မေး။ ။ သမီးကိုလုပ်တာ […]
ဗစ်တိုးရီးယားအမှု မိသားစုဘက်က မေးခွန်းတွေက ဘာလဲ DNA တကယ်ပျက်ခဲ့တာလား ..? အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် ရုပ်သံကတော့ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုကျူးလွန်ခံခဲ့ရတဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့ အမှုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမီးလေးဘက်က ဒိုင်ခံရေးသားပေးနေသူ သက္ကမိုးညို(fb acc name) – ဒေါက်တာဝင်းကိုကိုသိန်း နဲ့ BBC တို့အင်တာဗျူးလုပ်ထားတဲ့ ရုပ်သံပဲဖြစ်ပါတယ်။ […]
မင်္ဂလာပွဲမှာ ဇနီးအသစ်စက်စက် ဖောက်ပြန်တဲ့ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို အများသိအောင်ပြတဲ့ သတို့သား အမျိုးသမီးတစ်ကိုယ်တော် အလွတ်စုံထောက် Zhou ကို ငွေကြေးအလွန်ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးတစ်ဦးက ပုဂ္ဂိလက စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းအတွက် ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်အပ်တဲ့သူဌေးက သူနဲ့ ယူမယ့်ဇနီးလောင်းကို သိပ်မသင်္ကာလို့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းတွေ စုံစမ်းဖို့ Zhou ကို အလုပ်အပ်ခဲ့တာပါ။ […]